Umqeqeshi uNeil Powell enkingeni yabadlali - Bayede News
Umqeqeshi uNeil Powell enkingeni yabadlali
Babheke lukhulu kuMakhosi ngowezi-2019
IQEMBU lakuleli lombhoxo amaBlitzbokke (iSpringbok Sevens) libhekene nomqansa wokuthi livuke lizithathe njengoba ngeledlule lingenzanga kahle kuHSBC World Rugby Series. Ngele dlule lo mqhudelwano ohambela amazwe ububanjelwe e-United Arab Emirates Stadium, eDubai.
Elakuleli elicijwa uNeil Powell liphume endaweni yesi-6, emva kokuthi lihlulwe iFiji ngamaphuzu angama-24 kwali-19 lapho kade libanga indawo yesihlanu.
Kule mpelasonto ezikaPowell zizobuyela ensimini ukuvikela isicoco seHSBC World Rugby Series lapha eNingizimu Afrika, eCape Town Stadium.
Izwe okuyilo elinqobe iDubai Rugby Sevens iNew Zealand Sevens, ebhaxabule i-USA ngamaphuzu angama-31 kwayisihlanu.
Kusukela ngowezi-2010 lo mqhudelwano mawudlalelwa lapha ekhaya ezikaPowell zisakwaze ukuthi zinqobe kathathu ngowezi-2013, ngowezi-2014 nangowezi-2014. Izwe elisakwaze ukuthi linqobe kaningi iNew Zealand eyanqoba ngowezi-2010, ingowezi-2011, ingowezi-2012 nangowezi-2017, elinye izwe elisakwaze ukuthi linqobe i-England Sevens eyanqoba ngowezi-2016.
Elakuleli kubukeka kuzomele lisebenze kanzima uma lifuna ukudlule emzuliswaneni olandelayo njengoba lizotholana nezimbangi zazo ezinkulu. Liseqoqweni u-A lapho kuboshelwe khona iZimbabwe, iSamoa kanye neNew Zealand.
Umdlali okunguyena ithemba leSpringbok Sevens uMuller du Plessis. Ngeledlule ushayele ezikaPowell amatry ayisikhombisa kula matry kubalwa namathathu awashaye emdlalweni owodwa lapho elakuleli belitholene phezulu neFiji.
UPowell uthe bayasazi isizathu esenze ukuthi ezakhe zingenzi kahle eDubai.
“Ukungayitholi imidlalo yobungani ngaphambi kokuthi siqale iHSBC World Rugby Series, kube nomthelela omkhulu ukuthi singenzi kahle eDubai,” kusho uPowell.
Lo mqeqeshi uqhube wathi: “Ngiyakuqonda ukuthi kubhekwe lukhulu kithina kodwa abantu kumele bazi ukuthi ngeke kufane nakweminye iminyaka. Okwenza ngisho lokho ingoba iqembu lilahlekelwe abadlali abaningi, kusho ukuthi uma siqala sakha iqembu. Ngeke ngiqambe amanga kusazothatha isikhathi ukuthi sibe neqembu eliqinile elifana naleli langesizini ephelile. Engingakuqinisekisa ukuthi umqhudelwano nomqhudelwano esizowudlala sizozama ukuthi sinyuse indlela esidlala ngayo, ukuze sibuyele endaweni yethu,” kubeka uPowell.
Abadlali akade egabe ngabo uPowell abangeke besaba ingxenye yeBlitzbokke ngenxa yokuthi sebedlala lapho kudlala abadlali abali-15 enkundleni, uRuhal Nel, uKwagga Smith, uDylan Sage noTim Agaba.
Umdlali okunguyena uPowell azomkhumbula kakhulu uma sekunzima uSeabelo Senatla, lo mdlali usemele elakuleli emidlalweni engama-203 wakwazi ukulitholela amaphuzu ayi-1 120.
nguQhelani Msweli Dec 6, 2018